रजनी र फिलिपको सम्बन्ध पर्दाफास, कति छ रजनीसंग फिलिपको सम्पति ? – Rastriyapatrika
रजनी र फिलिपको सम्बन्ध पर्दाफास, कति छ रजनीसंग फिलिपको सम्पति ?
मृत्‍यु कसैको लागिपनी सहज् कुरा हैन तर पनि स्विकार्नै पर्ने तितो यथार्थ हो । हो यस्तै तितो यथार्थ स्विकारे बेलायति नागरिक फिलिपले । मृत्‍यु संग जुधिरहेका बेलायति नागरिकअले केही दिन अघी अन्तिम श्वास फेरे।उनी बिदेशी भुमी छाडेर नेपाल आएको धेरै भएको थियो ।शायद त्यसैको प्रतिफल होला उनी आफ्नो धर्म छाडेर हिन्दू भएका थिए ।
सोही कारण उनको हिन्दू सस्कार अनुसार हिजो पशुपतिमा अन्तिम सस्कार गरियो ।उनको अन्तिम सस्कारमा बिनय जंग बस्नेत , क्रिष्टिना र उनकी प्रेमिका रोजिना गोयल लगायत अन्य ब्यक्तीको उपस्थितिमा बिनयले दाग बत्ती दिए ।उनलाई बिनयले दाग बत्ती दिए संगै उनको प्रेमिका मुर्छित भएर ढलेकी थिईन् । रोजिना ट्राभल एजेन्सी मा काम गर्ने बैनीको सम्पर्क बाट फिलिप लाइ चिनेको बताउछिन । फिलिपले बेलायतबाट रोजिकै खातामा पैसा जम्मा गर्ने गरेका थिए ।
फिलिपलाइ रोजिनाले नै बिरसम्म पुराएकी थिइन ।आफ्नो स्वास्थ्यमा समस्या भएकै कारण उनि निरन्तर फिलिपको उपचार मा जुट्न नसकेको बताएकी छन् । रोजिना २ बर्ष देखिने फिलिपको सम्पर्कमा रहेकी थिइन् । हामि साथि मात्र थियौ मैले फिलिपलाइ अलपत्र छोडेको हैन हामी असल साथी भएकै कारण दुताबासले आफुलाई फिलिपको शब जिम्मा दिएको जिकिर गरिन । भिडियो हेर्नुहोस